UAzeez Mustapha ngumbhali woFunda urhwebo 2
umbhali: UAzeez Mustapha
Uhlalutyo lwexabiso le-EURUSD - ngoMeyi 16 Ukuchithwa kwinqanaba lenkxaso kwi-$ 1.02 kunokutyhala ixabiso kwi-$ 1.01 kunye ne-$ 1.00 amanqanaba okuxhasa. Ukuba umgangatho wenkxaso we-$ 1.02 ukhuselwe yinkunzi yenkomo, ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba okumelana ne-$ 1.04, i-$ 1.06 kunye ne-$ 1.07. I-EUR/USD Amanqanaba aPhambili kwiMarike: Amanqanaba okuchasa: […]
Iingxelo zamva nje zibonisa ukuba iSebe lezeMali lase-UK, i-HM Treasury, iya kubona ngezicwangciso zayo zokulawula intlawulo ye-Stablecoins engathintelwa yi-crash yemarike yakutshanje. Isityhilelo seza emva kokuba uTerra efumene ukuqhawuka, okwabangela ukufa kwe-algorithmic Stablecoin UST kunye nethokheni yayo yendalo iLUNA. Ngexesha lokushicilela, i-UST iyarhweba […]
Uhlalutyo lwexabiso le-Bitcoin SV - Meyi 16 Ukonyuka kwisantya sabathengisi kunokophula inqanaba lenkxaso kwinqanaba le-50 yeedola kwaye kunokunciphisa ixabiso ukuya kwi-45 kunye ne-40 yexabiso lexabiso. Ukungaphumeleli ukwaphula inqanaba lexabiso le-50 yeedola kunokukhokelela ekuguqulweni kwexabiso kunye nokunyuka kwexabiso ukuya kumanqanaba okumelana ne-$73, i-$87 [...]
I-GBP / i-USD ithatha inkxaso ephantsi malunga ne-1.2340, njengoko ukuguqulwa kwesikhokelo okuphawulwe - iintsuku ezintathu ezidlulileyo ziyancipha. Oku kuncipha kwenzeke ngexesha lemingeni emitsha yokuziva kwangoko ngale ntsasa eYurophu. Enye into echaphazela i-GBP / USD yinkxalabo: ivela kwiintetho zeBrexit; mva nje malunga NIP: Northern Ireland Protocol. Umoya wentengiso uguquke waba muncu emva kwesibhengezo saseTshayina […]
Ether plunges to $1,763 lowETH/USD is in a downward correction Ethereum ETH) Current StatisticsThe current price: $2,078.35Market Capitalization: $250,631,086,382Trading Volume: $17,295,106,068Major supply zones: $4,000, $4,500, $5,000Major demand zones: $3,500, $3,000, $2,500 Ethereum (ETH) Price Analysis May 15, 2022 Ethereum’s (ETH) price is in a downtrend as it faces rejection at $2,167. The largest altcoin fell […]
Uhlalutyo lwe-AUDJPY - NgoMeyi 16 I-AUDJPY ifumana ukuhla okungalindelekanga ngaphantsi kwenqanaba elibalulekileyo le-91.120. Ixabiso ekuqaleni livalwe kwi-95.620, eyakhokelela ekuphumeni okuye kwamiswa kuphela kwinqanaba le-91.120 lenkxaso eqinile. Emva koko, imarike yaqala ukuhlangana ukusuka apho, ihambela phezulu ngetshaneli. Yayiluhambo olunzima lokuba […]
I-Monero (XMR) Uhlalutyo lwexabiso: NgoMeyi 15 Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zonyusa umfutho wazo, izinga lokumelana ne-185 yeedola linokuthi lingene phezulu, elinokwandisa i-bullish trend to high 218 kunye ne-250 yeedola. Xa kukho ukuphuka kwinqanaba lenkxaso ye-$ 142, ixabiso leMonero liya kuncipha ukuya kwi-$ 124 kunye ne-$ 108 amanqanaba Amanqanaba aPhambili: Ukumelana [...]
Ngelixa imarike ye-crypto ibonakala ngathi yindawo ekungahambelwanga kuyo okwangoku njengoko uninzi lweempahla zedijithali ziphulukana nexabiso, i-DeFi Coin (DEFC) iye yahlala izinzile. Abanye abahlalutyi bachaza ukuba i-DEFC kunye ne-DeFi Swap yokutshintshiselana ngokusesikweni (i-DEX) ikwindawo enenzuzo yokungabuni nje ubusika obune-bearish kodwa ikhuphe imbuyekezo engaphezulu […]
Ngeveki, abaphathi abaphezulu kwi-International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) badibene ukuze baxoxe nge-cryptocurrency kunye nokulawulwa kwe-crypto. I-IOSCO iquka imibutho yehlabathi enoxanduva lokulawula ngaphezulu kwe-95% yeemalike zezemali zehlabathi kunye nokhuseleko kwiindawo ezingaphezu kwe-130. Ukucacisa imfuneko engxamisekileyo yeqela lehlabathi ukuphuhlisa isakhelo sokulawula i-crypto, [...]
← Entsha izithuba1 2 ... 620 abaDala izithuba →